Hot Pot လုပ်စားမလား Easy cook | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » Hot Pot လုပ်စားမလား Easy cook
Hot Pot လုပ်စားမလား Easy cook
Posted by weiwei on Jun 6, 2011 in Food, Drink & Recipes | 24 comments
Hot pot ဆိုင်မှာသွားစားလျှင် ဈေးကြီးပြီးမတန်တာနဲ့ ကျွန်မကတော့ အိမ်မှာပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်စားပါတယ် … သူငယ်ချင်းတွေတစ်ရက်ဆုံဖြစ်ကြတော့ hot pot လုပ်ကျွေးရင်း ရွာသားတွေကို သတိရတာနဲ့ လုပ်နည်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် …
hot pot လုပ်စားရာတွင် ကိုယ်ထည့်ချင်သော အသား၊ ငါးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ရေစင်စင်ဆေးပြီး သင့်တော်သလို လှီးဖြတ်ထားပြီး ပန်းကန်ထဲတွင် ထည့်ထားရပါမည်။ အရိုးပြုတ်ရည်အိုး (သို့မဟုတ်) ရိုးရိုးရေဖြင့်လည်း ပြုတ်စားလို့ရပါသည်။ အရေးကြီးသော ပြင်ဆင်မှုမှာ တို့စားရန်အချဉ်စပ်နည်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မ၏ အချဉ်စပ်နည်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။
အချဉ် ၂ မျိုးကို ဆတူရောစပ်ရပါမည်။ ရိတ်ရိတ်လှီးထားသော နံနံပင်၊ နှမ်း၊ ဆီတို့ဗူးအနည်းငယ်ကို ရေနွေးနဲနဲဖြင့်ဖျော်ထည့်ရမည်။ ငံပြာရည် နဲနဲထည့်ရမည်။ သံပုရာသီး တစ်ဝက်ခန့်နှင့် ဆားအနဲငယ်ထည့်ပြီး အရသာကို လိုသလို မြီးကြည့်ပြီး အဆင်ပြေသလို လိုတိုးပိုလျော့ လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
အရိုးပြုတ်ရည်မရှိပါက ရေနွေးဆူဆူအိုးထဲသို့ ခနောချဉ်စပ်အခဲ (၂ ခဲ) ထည့်လိုက်ပြီး စားနိုင်သလောက် နဲနဲချင်း အသားနဲ့ အရွက်များကို ထည့်ပြုတ်ပြီး အချဉ်နဲ့ တို့စားပါက ဆိုင်မှာသွားစားသည်နှင့် အရသာတစ်ထပ်ထဲတူပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး ပျော်စရာကောင်းသည့် ညနေစာတစ်ခုကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဟိဟိ စားချင်လိုက်တာ မမဝေေ၀ ချက်ကျွေးနော် တွေ့ဆုံပွဲနေ့ကျရင် ဟိဟိ
ခနော်အမှုန်နဲ့ အချိုမှုန်ဆိုတာ ကုလားကြီးနဲ့ မာမူကြီးပဲဗျို့… အန်တီဝေဗိုက်ထဲမှာ ဓာဓုဗေဒအဆိပ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီ။ ရွာထဲက ဆရာဝန်ဒေါ်မိုးတို့၊ ဘာတို့ ကယ်ကြပါအုံး….အီးတုံးကတော့ ဘားလမ်းက ဧမာနွေလဘုရားကျောင်းရှေ့မှာ ၁၀၀တန် မုန့်ဟင်းခါးရှိတယ်တဲ့၊ ဘာမှလည်း မဆိုင်ဘူးနော်၊ မနောက်ကောင်းပါဘူး အီးတုံးရယ်..
အရသာမရှိဘူးထင်မှာစိုးလို့ ခနောအခဲတုံးထည့်လိုက်လို့ စေတနာနဲ့ရေးလိုက်တာ … ကျွန်မကတော့ ဘာမှမထည့်ပါဘူး … သဘာဝအရသာအတိုင်းပဲ hot pot ကို လုပ်စားတယ် … ဆားမပါ ဆီမပါတဲ့ ဂျပန်အစားအစာ Sukiyaki …
၁၀၀ တန် မုန့်ဟင်းခါးက သာကေတ အ၀ိုင်းနားမှာလဲရှိတယ်တဲ့ …
ခနောထက် … Maggi လေးက ပိုကောင်းတယ် …
ကိုကြောင်ကြီးပြန်လာလျှင် ဧည့်ခံပါမယ် 100တန်မုန့်ဟင်းခါး အ၀ကျွေးပြီး :D
ကျေးဇူးပဲ မဝေရေ ကူးသွားပြီ။ ချစ်သူကြိုက်တယ် ဆိုရင် ချက်ကျွေးမယ် ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။
၁၀၀ တန် မုန့် ဟင်းခါး ဆို တာ ဘယ်လို မျိုး လဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးကြပါလား ဗျာ ။ ကျွန်တော် က မန်းတလေး က ဆိုတော့ မကြားဖူး မမြင်ဖူး လို့ ပါ ။ ၁၀၀ ပဲ ပေးရတာ ဆိုတော့ ၁၀၀ ဖိုး ဖြစ်အောင် ဘယ်လို များ ချက် ။ ဘာတွေ များ ထည့်ပေး သလဲ ဆိုတာ လေး ကျေးဇူးပြု ပြီး ပြောပေးကြပါဦး ။
100 တန်မုန့်ဟင်းခါက ငါးနည်းနည်းလျှော့ထည့် အရည် ကျဲကျဲနဲ့ အညာသားတွေချက်ထားတာ ပုံမုန် မုန့်ဟင်းခါးကိုပဲ အခြေခံလူတန်းစားတွေ စားနိုင်အောင် ပါငင်ပစ္စည်းတွေလျှော့ပြီး ချက်ထားတာပါ .. မဆိုးပါဘူး ပူနေတုန်းစားရင် စားလို့ဖြစ်ပါတယ် .. အေးသွားရင်တော့ နည်းနည်း ညှီတယ် .. ရန်ကုန်ရောက်ရင် ဆူးလေနားက ဧမာနွေလဘုရားကျောင်းနားကို သာလာခဲ့ပါ . 100 တန်မုန့်ဟင်းခါးသည်လေးတွေ အများအပြားတွေ့နိုင်ပါတယ် ….
မဝေရေ ကျေးဇူးပဲ ချစ်ချစ်ကြီးက hot pot ကြိုက်တာမို့ ချက်ကျွေးလိုက်ဦးမယ်။
သူများတွေ ဟော့ ပေါ့ ဆိုလို ကိုလဲ တခါမှ မစားဘူး ဘူး .. ကြည့်ရတဲ့ ပုံစံအရဆိုရင်တော့ တော်တော်ကောင်းမဲ့ပုံပဲ..ကျွန်တော်ကတော့ မကူးတော့ပါဘူး မီးဖိုချောင်ထဲ ကွန်ပျူတာ မသွားပြီး တခါထဲ လက်တွေ့ ချက်စားကြည့်မယ်..
ကြုံတုန်းပေါ့သာကေတ အ၀ိုင်းနားမှာပါပဲ သတ်သတ်လွတ် ဒန်ပေါက်ပါ ရပါတယ် ဈေးလဲသက်သာပါတယ်…. မမမှီက hot pot ကို ပဲပင်ပေါက်နဲ့ ချက်ကျွေးမှာလား …:)
ပုဇွန်၊ ငါးအသားလွှာ၊ ကြက်သားအသားလွှာ၊ ငါးဖယ်လုံး၊ ကင်းမွန်၊ ဂျပန်တို့ဖူး၊ ပဲပြား၊ ဘဲသွေး၊ ငုံးဥ၊ မုန်ညင်း ဖြူ၊ စိမ်း၊ ပဲရွက်၊ ကန်စွန်းရွက်၊ ငုံးဥ၊ ဘေဘီကွန်း၊ ပြောင်းဖူး၊ ………
အရိုးပြုတ်ရည်က ၀ယ်လို့ရပါသလား။ အရည်ထဲကို ဘာမှ မထည့်ရဘူးပေါ့နော်။
အရိုးပြုတ်ရည်က ၀ယ်လို့မရဘူး … ၀က်ရိုး ပြုတ်ထားတဲ့အရည်ကို သုံးရင် ပိုကောင်းပါတယ် … ၀က်ရိုးပြုတ်တဲ့အခါ စဆူတဲ့အခါမှာ အနှစ်လိုအရည်တွေ အပေါ်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ် … အဲဒီအချိန်မှာ မီးခဏပိတ်ပြီး တက်လာတဲ့အနည်တွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ရပါမယ် …. ပြီးရင်တော့ ရေများများနဲ့ ၂ နာရီလောက် ပြုတ်ထားတဲ့အရည်ဆိုရင် ချိုပြီး မညှီဘူး …
၀က်သား ၁၀၀၀ ဈေးနဲ့ ရတယ်တဲ့ ဦးဖတ်တီး ရေးထားတယ်။
၀က်ရိုးဆိုတော့ ၅၀၀ ဈေးလောက်နဲ့ ရချင်ရမယ်။
အိုးထဲ ထည့် မီးနည်းနည်းလေးနဲ့ ကြာကြာပြုတ် အိုးကို အလုံပိတ်ထား.. ဆူချင်သလောက် ဆူပလေ့စေ.. အရည် မဝေ ကျအောင် မီးနည်းနည်းနဲ့ ပြုတ်ခိုင်းတာ..
ပြုတ်ရင်းနဲ့ အရည်က ဖြူစွပ်လာရင်.. အလွန်ကောင်းတဲ့ ၀က်ပြုတ်ရည်ရပြီ ကွဲ့…
ဟော့ပေါ့မှာ သုံးလို့ ရပြီ။
ရွာသားတွေ တွေ့ဆုံပွဲကို ဟော့ပေါ့ ဆိုင်မှာ ချိန်းလိုက်လျှင် မကောင်းဘူးလား… ။ အများကြီးလည်းစားရတယ် .. ဟီးဟီး ဗိုက်ဆာလာပြီ … ။
စောစောကသိရင် ဧည့်သည်လာလုပ်ပါရဲ့။ ခုတော့ ……… ရှလွတ် ရှလွတ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ၁၀၀ တန်တော့သိဘူး ဗိုလ်တထောင်ဘုရားက ၂၀၀ တန်ပဲ စားဘူးတယ်ဗျ
Hot pot ထက် ကျွန်တော် နံနက်တိုင်းစားနေတဲ့ ခေါက်ဆွဲအွမ် ကိုပိုကြိုက်သဗျ ကြက်ဥပေါင်းလေးက တစ်ဖက်ဆို ဂွတ်နေပြီ … စားကြမလား ခေါက်ဆွဲအွမ် လာခဲ့နော် :D
ဟော့ပေါ့က ဆောင်းတွင်းဆိုရင် ပိုစားလို့ကောင်းတယ် …. ရာသီဥတုက အေးအေး … ဟင်းက ပူပူလေးနဲ့ …. ပြောရင်းနဲ့ စားချင်လာပြီ …….
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မဝေ။ ကျမလဲ ရန်ကုန်ပြန်ရင် မိသားစုနဲ့ တူတူချက်စားဘို့ Print ထုတ်လိုက်ပြီ။
ကျေးဇူးပါပဲ။ မွေးနေ့နီးနေတာနဲ့အတော်ပါပဲ။ အကုန်ကျသက်သာတဲ့နီးကို အခုမှပဲတွေ့တော့တယ်။
သူငယ်ချင်းတွေကို ချက်ကျွေးဖြစ်အောင် ကျွေးလိုက်မယ်။အခုလို ပြောပြသောမမ ကိုကျေးဇူးပါပဲ။
ဝေေ၀့ easy cookတွေ နဲ့ ဝေးနေတာတော်တော်ကြာပြီ။ကျေးဇူးပါ။
ထိုင်ဝမ် မှာတော့ hot-pot စား တာ ကို hot-pot soup stock အမျိုးမျိုး အပြောင်းအ လဲ နဲ့ စားကြတယ် ။ မွန်ဂို ထိုင်းချဉ်စပ် တရုတ်ဆေးပေါင်း ဂျင်းနှမ်းဆီ sea-food,european style, japanese style ,korean style ဆိုပြီးဆိုင်တွေ မှာ လည်း ရောင်း တယ် ။ ready-made စပ် ပြီး သား လေးယောက်စာအထုပ် ၉၅ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာ နဲ့လဲ ကိုယ့်ဖာသာ အိမ် မှာလုပ်စားဖို့ လဲရောင်း တယ် ။ ဆောင်းတွင်း ဆို 5-star hotel တွေ မှာ လဲ တင် တယ် ။ွအ ရမ်းရောင်း ရ တယ် ။သူငယ်ချင်း မြန်မာပြန် တောင် hot-pot franchise ဆိုင် ဖွင့်ထား တယ် ။
ready-made အထုပ် လင့် ခ http://www.mama21.com.tw/index.html
hot-pot ဆိုင် ကြော်ငြာ လင့် ခ http://www.kingfood.com.tw/index.php?O
ပျော်ပါးရန်ပင် ကျန်တော့သည် ။
(ကူးသွားပါပြီ ခင်ဗျာ ၊ ကျူးဇေး ပါ )
နယူရီးယာမှာ လုပ်စားရမယ် … လုပ်စားရင်ခေါ်လိုက်မယ်နော် မဝေ..